विश्वविद्यालयमा समन्वयकारी नेतृत्व चाहिन्छ
Kathmandu भाद्र १६, २०७६ सोमबार
विश्वविद्यालयका उपकुलपति धमाधम खाली भइरहेका छन् । विश्वविद्यालयको उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रार पदमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा अनेक विकृति आयो, गुणस्तरीय विद्यार्थी उत्पादन भएनन् भन्ने टिप्पणी हुने गर्छ । विश्वविद्यालय बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना साबित भयो भन्ने पनि वैचारिक बहस चौतर्फी हुने गरेको छ । के समस्या राजनीतिक नियुक्तिले मात्र हो ? कि अन्य कारण पनि छन् ? यस विषयमा छलफल गर्न नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनका अध्यक्ष प्रा.डा. यादवप्रकाश लामिछाने, शिक्षाविद् प्रा.डा. वासुदेव काफ्ले र नेपाल प्राध्यापक सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष रामेश्वर उपाध्यायलाई गोरखापत्र संवादमा निम्त्यिाएका छौँ । प्रस्तुत छ– उहाँहरूसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको नियुक्तिको बहस छ अहिले, कस्तो मान्छे नियुक्ति गर्दा विश्वविद्यालय राम्रा बन्छन् ?
प्रा.डा. लामिछाने : पाँचवटा विश्वविद्यालयमा भदौ ६ देखि उपकुलपति खाली भए । असोज ६ देखि दुईवटा खाली हुँदै छन् । बाँकी चारवटाको खाली हुने क्रम छ । कहीँ रेक्टर हुनुहुन्छ, कहीँ रजिष्ट्रार मात्र हुनुहुन्छ । विश्वविद्यालयको प्राध्यापकको हिसाबले भन्दा अहिले विश्वविद्यालयहरू जुन गतिमा धराशयी भइरहेका छन्, यसको सुधारमा छलाङ मार्न त सकिँदैन तर सुरुवात गर्न सकिन्छ । विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । उपकुलपतिको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुहुन्छ । प्राज्ञिक ढङ्गले नेतृत्व गर्न सक्ने र राजनीतिक चेत भएको व्यक्ति हुनुपर्छ । साङ्गठनिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता नेतृत्वमा चाहिन्छ । उपकुलपति नियुक्त गर्दैमा रातारात परिवर्तन भइहाल्ने होइन । त्यहाँ समस्याका चाङ छन् । प्राध्यापक, विद्यार्थी, कर्मचारीका समस्या छन् । त्यस्तो व्यक्ति चाहिन्छ, जसले विश्वविद्यालयको सबै समस्या मसिनोगरी बुझेको होस् । सबैले आफ्नो वर्गको हितको मुद्दा उठाउने गर्छन् । प्राध्यापकहरू कुन मुद्दा लिएर प्रस्तुत भइरहेका छन्, विद्यार्थीको चाहना के हो, कर्मचारीको मनोविज्ञान बुझ्ने नेतृत्व भएन भने व्यवस्थापन गर्न सक्दैन ।
कर्मचारीहरू सञ्जाल बनाएर बसेका छन् । उपकुलपतिहरू, प्राध्यापकहरू आउँछन्, जान्छन् । कर्मचारीको हितमा काम भएन भने नेतृत्वलाई घुमाउँछन् । नेतृत्वले योजना लिएर आए पनि फेल बनाउने गरी कर्मचारी प्रस्तुत हुन्छन् । हामी स्थायी सरकार हौँ भन्ने मानसिकतामा काम गर्छन् । आफ्नो खेमाको नेतृत्व आएमा केही कर्मचारीहरू आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नमा बढी ध्यान दिन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा नेतृत्वले आफ्नो पोजिसन कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्नेमा ध्यान दिन बाध्य हुन्छ । दुर्गतिको प्रारम्भ त्यहीँबाटै सुरु हुन्छ । उपकुलपति भएर आउने प्राध्यापकको आउटलुक के छ ? उसले कति विद्यार्थी र कस्तो विद्यार्थी उत्पादन गरेको छ ? राजनीतिक, साङ्गठनिक, प्रशासनिक तथा वैचारिक क्षमता भएको व्यक्ति हो कि होइनबारे ख्याल गर्नुपर्छ ।
प्रा.डा. काफ्ले : विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा आउने व्यक्तिमा प्राज्ञिक चेत सर्वोपरि हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय प्राज्ञिक थलो हो, राजनीतिक थलो होइन । राजनीतिक चेत बढी र प्राज्ञिक चेत कम भयो भने त्यसले काम गर्न सक्दैन । राजनीतिक चेत नभएको व्यक्ति आउनुपर्छ भन्ने पनि होइन । राजनीतिक ज्ञान चाहिन्छ तर प्राज्ञिकमा ऊ बढी निपूर्ण हुनुपर्छ । तर, यहाँ कुनै पनि वैचारिक सङ्गठनहरूले प्राज्ञिक तहलाई ध्यान दिएर बहस चलाएको थाहा छैन । मूल क्षेत्र राजनीति भएकाले राजनीतिक चेत चाहिन्छ तर त्यो चेत केका लागि ? आफ्नो समूह, परिवार, चिनजानका मान्छेको स्वार्थ सम्बोधनमा मात्र त्यो चेत प्रयोग हुनुभएन । विश्वविद्यालय प्राज्ञिक क्षेत्र हो । राजनीतिले प्राज्ञिकतालाई ओझेल पार्ने काम गरेको छ । यो बेठिक छ । कुनै पनि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको तर्फबाट जुन चलखेल हुन्छ, त्यो राजनीतिक कारणले हुने गर्छ । प्राज्ञिकतामा कमी भयो भने उसले राम्रो काम गर्न सक्दैन । विद्यार्थीको छलफल पनि राजनीति केन्द्रित छन्, प्राज्ञिकतातर्फ भएको देखिँदैन । साङ्गठनिक कुशलता नेतृत्वमा चाहिन्छ । तीन–चारवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । राजनीतिक चेतलाई प्राज्ञिक चेतले दमन गर्नुपर्छ । दमनको अर्थ सुषुप्त अवस्थामा लग्ने भनेको होइन । प्राज्ञिक निर्णय, नीति निर्माण गर्दा प्राज्ञिक चेतले दिशा निर्देश गर्ने हुनुपर्छ । राजनीति गर्ने त दलहरू छँदै छन्, विश्वविद्यालयमा किन राजनीति चाहियो ? राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र बुझेको हुनुपर्छ । विद्यार्थी पनि हाम्रै परिवारका सदस्य हुन् । अन्तै धर्तीबाट आएका त हैनन् । विद्यार्थीलाई प्राज्ञिक केन्द्रबिन्दुमा राखेर हेर्नुपर्छ । तर, त्यस्तो भएको छैन । जब विद्यार्थी राजनीतिक माग लिएर उपकुलपतिकहाँ जान्छन्, अनि मात्र सम्बोधन गरेको देखिन्छ । तर प्राज्ञिक, शिक्षण प्रशिक्षणको विषयको माग उठाउँदा ध्यान दिने गरिँदैन । उपकुलपति राजनीतिक प्राणी होइन, प्राज्ञिक प्राणी हो । त्यस्तो माग पनि विद्यार्थीले धेरै कम मात्रामा उठाउँछन् ।
उपाध्याय : विश्वविद्यालय भनेको राष्ट्रलाई निर्देशित गर्ने थलो हो । यो थलो बिग्रनु भनेको राष्ट्र बिग्रनु हो । कार्यकारी नेतृत्व उपकुलपति नै हो । कुलपति आलङ्कारिक भूमिकामा हुनुहुन्छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार उपकुलपति नै कार्यकारी प्रमुख हो । विश्वविद्यालय स्वायत्त थलो हो । त्यहाँ राजनीतिसहित अध्ययन, अनुसन्धान हुन्छ । तर, विश्वविद्यालय राजनीतिभन्दा बाहिर छैन । त्यहाँ राजनीति गर्ने होइन, राजनीतिको खोजी गर्ने थलो हो । विचार उत्पादन र प्रवाह गर्ने थलो हो । यस्तो थलोलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्ति निःसन्देह प्राज्ञिक हुनुपर्छ । प्रशासनिक ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान पनि चाहिन्छ । प्राविधिक प्रखरता र प्राज्ञिक दक्षता नै आवश्यकता हो । विश्वविद्यालयमा माथिबाट निर्देशन कुरेर बस्नेखालको व्यक्ति कुलपति बन्नुहुँदैन । प्राज्ञिक मूल्य–मान्यता र स्वायत्तता बुझेको, विश्वविद्यालयको विश्वव्यापी मान्यता बुझेको व्यक्ति नै चाहिन्छ । कहाँबाट खोज्ने ? व्यक्ति कुनै न कुनै विचारमा सम्बद्ध हुन्छ पनि । पार्टीलाई भोट हाल्ने व्यक्ति सबै राजनीति गर्ने व्यक्ति हुँदैन । मतदाता र राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भनेको फरक विषय हो । उपकुलपति अनिवार्य रूपमा प्राज्ञिक हुनुपर्छ । विश्व परिवेशअनुरूप प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, दूरदृष्टि भएको व्यक्ति चाहिन्छ । मान्छे धेरै छन् यहाँ तर खोजी गर्न सकिएको छैन । राम्रो व्यक्ति उपकुलपतिमा जान चाहेकै हुँदैन । त्यहाँ गएपछि विद्यार्थी, कर्मचारीको घेराउमा पर्छ । आफ्नो प्राज्ञिकताअनुसार काम गर्न पाउँदैन । काम गर्ने वातावरण बनाउने काम सरकारको हो, बनाइदिनुपर्छ ।
विगतमा राजनीतिक बाँडफाँडका आधारमा पनि पदाधिकारी नियुक्त भए, देशको अवस्था त्यस्तै थियो । अहिलेको अवस्था फरक छ । स्थायी सरकार छ । हामी एउटा गतिमा जाँदै छौँ । त्यसैले विश्वविद्यालयमा मेरो, तेरो मान्छे भनेर नियुक्ति गर्नुहुँदैन । साँच्चिकै चार वर्षमा विश्वविद्यालय हाँक्न सक्ने र सक्षम व्यक्तिलाई उपकुलपतिको नेतृत्वमा ल्याऊँ ।
स्थानीय तहमा खोलिएका सामान्य विद्यालयले प्रधानाध्यापक छनोट गर्दा निश्चित कार्ययोजना माग्ने गरिन्छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा किन योजना मागिँदैन ? हचुवाको भरमा किन नियुक्ति गरिन्छ ?
प्रा.डा. लामिछाने : मैले राजनीतिक चेत मात्र भनिनँ, साङ्गठनिक, प्रशासनिक सबै बुझेको प्राज्ञिकताको कुरा गरेको हुँ । अघिल्लो सरकारले उपकुलपतिको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको एउटा कमिटी गठन गरेको थियो । त्यसले प्रतिवेदन पनि दियो । त्यो प्रतिवेदन पास भएन । छोटो समयमा कार्ययोजना मागेर नेतृत्व छनोट गर्न सकिन्छ । तर, कार्ययोजना पेस गर्दैमा त्यसको छनोट सही हुन सक्दैन । कार्ययोजना बनाइदिने एकसेएक छन् । जस्तोसुकै कार्ययोजना बनाएर प्रस्तुत गर्न सक्छन् । त्यो आधारमा मात्रै छनोट गर्दा उचित नहोला । विश्वविद्यालयलाई त्यस्तो नेतृत्वले नेतृत्व गर्न सक्दैन । गोजीबाट टिपेर लग्नु पनि ठीक भएन । साङ्गठनिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र बुझेको व्यक्ति नै नेतृत्वको हकदार हो । नियुक्ति गर्दा त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ नै । विश्वविद्यालय एकातिर छ, हामी अर्कैतिर गइरहेका छौँ । विद्यार्थीको चेत अर्कैतिर गएको देखिन्छ । अहिले प्राध्यापक भन्न पनि आफूलाई लाज लाग्ने अवस्था छ । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू नपढाएर तलब खान्छन् भन्ने आरोप पनि हामी खेप्छौँ । यसमा केही सत्यता छ तर दुई–चारजनाको कमजोरीले सबै प्राध्यापकलाई मुछ्नु पनि ठीक होइन । एउटा विषयमा पीएचडी गरेको हुन्छ । जिन्दगीभर त्यो विषयमा एउटा लेख नलेख्ने पनि प्राध्यापक छन् । कमजोरी छ, त्यसलाई सच्याएर जानुपर्छ ।
प्रा.डा. काफ्ले : प्राज्ञिक विचार बोकेको व्यक्ति नै नेतृत्वमा आउनुपर्छ । त्यस्तो व्यक्तित्वको अभिलेख राख्नुपर्छ । त्यो भएको छैन । दलका वैचारिक सङ्गठनले पनि त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । वैचारिक सङ्गठन भन्छौँ तर त्यसले विचार होइन, राजनीतिक चेतमात्र प्रवाह गरेको देखिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कस्तो व्यक्ति नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने बहस छैन, कुन विचारको हो भन्नेतिर बहस छ । हामी खुलापन, प्रतिस्पर्धाको कुरा गरिरहेका छौँ भने दलीय सिफारिस नगरौँ । राजनीतिक, वैचारिक सङ्गठनमा उसले के काम ग¥यो ? उसको क्षमता के हो ध्यान दिनुपर्छ । विचार बोक्ने पनि सक्षम हुन सक्छ तर त्यसमा आग्रह पूर्वाग्रह हुन्छ । राम्रो मान्छेलाई राम्रो भन्न किन हिच्किचाउने ? वैचारिक सङ्गठनभित्र नबसेको तटस्थ व्यक्तिलाई उपकुलपतिमा सिफारिस गर्न वैचारिक सङ्गठनलाई किन समस्या ? राजनीति त दलको जिम्मेवारी हो । प्राध्यापकहरू किन लाग्ने ? प्रतिस्पर्धाको संस्कृति स्थापना गरौँ । त्यसरी विश्वविद्यालय बन्छ । कुनै दलमा संलग्नता नरहेको प्राज्ञिक व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसो भयो भने ऊ कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रही हुँदैन । हामी परिवार, समाजबाट साङ्गठनिक कुशलता सिकेर आएका छौँ । यो आर्जन गर्ने विषय हो । त्यस्तो व्यक्ति पहिल्याऊँ । वैचारिक सङ्गठनहरूले कोल्टे फेर्नेबेला आयो । पार्टी सदस्यता लिएकोलाई मात्र स्थान दिने विषयलाई ध्यान नदिउँ । पार्टीप्रिय, विचारप्रिय, सङ्गठनप्रिय मात्र नखोजौँ । विश्वविद्यालय बनाउन नयाँ सोच र शैलीले काम गर्नैपर्छ ।
उपाध्याय : अहिले त हाम्रो विद्यमान कानुनले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यही नै हुने हो । यो व्यवस्था संशोधन नभएसम्म यही प्रवृत्तिको नियुक्ति हुन्छ । हामीले विभिन्न सुझाव दिएका छौँ तर सुनुवाइ भएको छैन । उपकुलपतिको नियुक्ति चार वर्षका लागि हो । विश्वविद्यालय सभा छ, कुलपति, शिक्षामन्त्री सबै हुनुहुन्छ । म्याद सकिएपछि सिफारिस समितिले सिफारिस गर्ने प्रावधान छ । भएको कानुनलाई सदासयतापूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दा पनि राम्रो हुन्छ । तर, भएको छैन । मेरो कार्यकर्ता कुन छ, भनेअनुसार कसले काम गर्छ ? भनेर नियुक्ति गर्दा हचुवा हुन्छ । विश्वविद्यालयकेन्द्रित मन राखेर यदि खोजी गरियो भने योग्य व्यक्ति नपाउने कुरै छैन । सर्च कमिटी छ तर राम्रो व्यक्ति खोज्दैन । छनोट कमिटीमै राम्रो व्यक्ति चाहिन्छ । हाम्रो मान्छेको ठाउँमा राम्रो मान्छे छनोट गर्न भनिएपछि कमिटीले के गरोस् ? ऐनको अपव्याख्या गरेर काम गर्ने गरिएको छ । तीनमहिने नियुक्ति पनि ऐनअनुसार भएको छैन । कानुनको मूल्य–मान्यताअनुसार नभएर हचुवाको भरमा नियुक्ति गरिँदैआएको छ तर यही कानुनलाई टेकेर पनि राम्रो मान्छे खोज्न सकिन्छ । विश्वविद्यालय राजनीतिक भर्ती गर्ने ठाउँ होइन । यो दुर्भाग्य हो, सच्याउनुपर्छ । म पनि कुनै विचारसँग नजिक छु तर वैचारिक भागबन्डाका आधारमा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा नियुक्ति गर्न हुँदैन भन्छु ।
देशमा राजनीतिक क्रान्तिबाट ठूलो परिवर्तन भयो । विश्वविद्यालय सुधार्न के अब प्राज्ञिक क्रान्तिको खाँचो परेको हो ?
प्रा.डा. लामिछाने : २०४८ सालमा निर्वाचन भयो । नेपाली काँग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो । एउटा किताब च्यातेर पढिँदैन भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अभिव्यक्ति दिनुभयो । त्यो भनेर एकमना सरकारको कुरा गरेको हो । हाम्रो समूहले राजीनामा दियौँ । त्यसपछि केदारभक्त माथेमा उपकुलपतिमा आउनुभयो । त्यसपछि २०५१ मा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पकालीन सरकार बन्यो । अघिल्लोले जे पाठ सिकाएको छ, पछिल्लोले त्यही सिक्ने हो । असजिलो भयो भने छाड्दिनुस् भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेपछि माथेमाले छाड्नुभयो । त्यसपछि कमलकृष्ण जोशी आउनुभयो । भागबन्डाको सुरुवात यसरी भयो ।
हामी एक ढङ्गले निर्देशित भयौँ । पार्टीको कार्यकर्ता, संयन्त्रअनुसार चल्ने । पदाधिकारीहरू सिफारिस गर्ने परम्परा छ तर त्यो परिस्थितिको उपज थियो । वैचारिक सङ्गठनले विचार दिएकै छन् । राजनीतिमात्र गरेका छैनन् । समयानुकूल पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नेमा भूमिका खेलेकै छन् । सबै बिग्रिसकेको छैन । विश्वविद्यालयमा वैचारिक संयन्त्र छ । हामीले प्राध्यापकहरूको प्रोफाइल पनि बनाएका छौँ । त्यसमध्येबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गर्ने गरेका छौँ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राम्रो सुरुवात गरेको छ । लुम्बिनी विश्वविद्यालयमा उहाँले गैरराजनीतिक उपकुलपति नियुक्त गर्नुभयो । हृदयरत्न बज्राचार्यलाई नियुक्त गर्नुभयो । उहाँ प्रजातान्त्रिक निकटको व्यक्ति हुनुहुन्छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा पनि त्यस्तै गर्नुभयो । बरु हामीले त अर्कै सिफारिस गरेका थियौँ तर त्यसो गर्नुभएन । बरु सेवा आयोगको अध्यक्षमा हामीले भनेको मान्छे नियुक्त गर्नुभयो । झन्डा बोक्ने मात्रलाई नियुक्त गरेको भन्नु गलत हो । यही सरकारले गरेको उदाहरण हो यो । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा कोही ‘आइडल’ मान्छे पाउन गाह्रो छ । यदि फेलाप¥यो भने पनि उसले विश्वविद्यालय चलाउन सक्दैन । कहीँ न कहीँबाट ऊ ‘गाइडेड’ हुनैपर्छ । राजनीति नै मियो हो, विचारलाई पनि राजनीतिले गाइड गर्छ । अहिले तत्काल नेपालमा आक्रामक परिवर्तन होला भन्ने लाग्दैन । तर, सुरुवात गर्नु राम्रो हो । राजनीति गर्ने ठेक्का राजनीतिक दलका नेताहरूकै हो । तर राजनीतिमा खारिएको व्यक्ति, राजनीति बुझेको व्यक्ति भएन भने उपकुलपतिमा असफल हुन्छ । तथापि ढिलोचाँडो प्राज्ञिक क्रान्ति हुन्छ ।
प्रा.डा. काफ्ले : प्राज्ञिक क्रान्ति भयो भने अहिलेको बहसलाई विस्थापित गर्छ । नामेट गरिदिन सक्छ । नयाँ राजनीति पनि आउन सक्ला । यही हुनुपर्छ भन्ने त छैन । प्राज्ञिक थलोबाट आएकाहरूले राम्रो राजनीति गरेका पनि छन् । प्राज्ञिक क्रान्ति गर्न अब हिँडेको बाटोले हुँदैन । परिवर्तन गर्नुपर्छ । विधि विधानले त स्थापित मान्यता बोकेर हिँडेको हुन्छ । तर, पुरानो भयो भन्ने चेत पनि त छ । यसलाई संशोधन गरेर जानुपर्छ । प्राज्ञिक क्रान्ति भनेको वैचारिक क्रान्ति हो । त्यो राजनीति होइन । हाम्रो शैक्षिक प्रणालीले राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्न सकेन । राजनीतिले शैक्षिक प्रणालीलाई दिशानिर्देश गरिरहेको छ । समय आउँछ । कुनै बेला शैक्षिक प्रणालीले राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्ला । बाटो अलि दुर्लभ छ तर सम्भव छ । अग्रगामी सोच लिएर बढ्ने शैक्षिक प्रणाली हो, राजनीति होइन ।
प्रधानमन्त्रीले केही परिवर्तन त गर्नुभयो नि । केही सोचेर गर्नुभएको होला । विश्वविद्यालयको काम प्राध्यापन, अनुसन्धान र प्रकाशनको हो । तर, हामी प्राध्यापनमा मात्रै सीमित रह्यौँ । अनुसन्धानले अध्यापनलाई तिखार्ने काम गर्छ । विडम्बना त्यो हुन सकिरहेको छैन । प्रौढतालाई तिखार्न अनुसन्धान नै चाहिन्छ । प्रकाशन चाहिन्छ । त्यसले विचार प्रवाह गर्छ । राजनीतिक निर्णयबाट प्राज्ञिक क्षेत्र प्रवाहित भयो अहिले । तेरो मेरो भन्ने बढी आयो । यो राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो ।
विश्वविद्यालयले अब आफ्नो पुनःपरिभाषा गर्नुपर्छ । उच्च जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो भनिन्छ, यसको पनि परिभाषा बदल्नुपर्छ । के ग¥यो भने उच्च जनशक्ति ? स्पष्ट हुनुपर्छ । त्रिविमा हिन्दी विभाग छ, एउटा विद्यार्थी छैन । त्यत्तिकै प्राध्यापकले तलब खाइरहेका छन् । पाठ्यक्रम पनि समयासापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्छ । अब हाम्रो वैचारिक सङ्गठन पनि वैचारिक रूपमा रहोस् । पार्टीको विस्तारित अङ्गका रूपमा नरहोस् । यो अभ्यास पनि गरौँ न त । हामीकहाँ राजनीतिक संस्कृति छैन । विकृति बढी छ । मेरो विश्वविद्यालयको विषय विज्ञता के हो ? स्पष्ट हुनुपर्छ । कृषि विश्वविद्यालयको विज्ञता कृषि हो, वनविज्ञान विश्वविद्यालयको विज्ञता वन र वातावरण हो । संस्कृति विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक पहिचान भनेको संस्कृत हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक पहिचान के हो ? पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, पोखरा, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक पहिचान के हो त ? यसको पनि व्याख्या हुनुपर्छ । अब नेतृत्व नियुक्त गर्दा प्रतिस्पर्धा गराउने प्रक्रिया थाल्नुपर्छ । त्यसले विश्वविद्यालयको हित हुन्छ ।
उपाध्याय : वास्तवमा प्राज्ञिक थलो भनेको प्राज्ञिक थलो नै हो । त्यहाँ सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष भनेर हेर्नुहुँदैन । विश्वविद्यालय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको केन्द्र हो । त्यहाँ सत्ता र प्रतिपक्ष हुनुहुँदैन । त्यसो भयो भने त्यो राजनीतिक थलोका रूपमा परिणत हुन्छ । उपकुलपति एउटाको, रजिष्ट्रार अर्काको र रेक्टर अर्को पार्टीका हुँदा पार्टी कार्यालयजस्तो देखिन्छ । त्यो चङ्गुलबाट विश्वविद्यालयलाई बचाउन पनि प्राज्ञिक क्रान्ति चाहिन्छ । यो बहस पनि प्राज्ञिक क्रान्तिको एउटा रूप हो । बिस्तारै हुन्छ । क्रान्ति सम्भव छ । र, आवश्यक पनि छ । त्यो चुनौती सामना हामीले गर्नैपर्छ । दुई/चारजना प्राध्यापकलाई हेरेर सबै प्राध्यापकको मूल्याङ्कन गरिनुहुँदैन । राम्रा प्राध्यापक पनि छन् यहाँ । राज्यले दिने मर्यादाक्रमअनुसारको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । मर्यादित भएन भन्ने तर वातावरण नबनाउने ?
प्राध्यापकको बस्ने कोठा हुँदैन । ऊ सार्वजनिक गाडीमा झुन्डिएर आवतजावत गर्न बाध्य छ । प्राध्यापक खपत हुने ठाउँ राज्यले दिनुपर्छ । हाम्रा उत्पादन कहाँ व्यवस्थापन गर्ने ? त्यसको खाका पनि राज्यले नै बनाउनुपर्छ । उत्पादन बजारमुखी कसरी बनाउने ? त्यसमा पनि विश्वविद्यालय र राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । राजनीति बुझेको नेतृत्व चाहिन्छ र उसले सबैसँग समन्वय गरेर जानुपर्छ । त्यस्तो क्षमता भएको व्यक्ति उपकुलपति चाहिन्छ । विश्वविद्यालय बिगार्ने हामी प्राध्यापकहरू नै हौँ । हामीले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छैनौँ । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त गर्ने प्रतिबद्धता सबैबाट हुनुपर्छ । त्यो प्रतिबद्धता राजनीतिक दलले पनि गर्नुपर्छ । प्राध्यापक र विद्यार्थीले पनि गर्नुपर्छ ।
प्रस्तुतिः लक्की चौधरी
खिम्तीलाई प्राधिकरण मातहत ल्याउन ढिलाइ
जनसम्पर्कका सुरक्षाकर्मी कोरोनाबाट बढी प्रभावित
सार्कमा कोरोना मृत्युदर बढ्दै
‘पहिलाको जस्तो बन्दाबन्दी हुँदैन’
राष्ट्रिय जनगणनाको १२औँ शृङ्खलामा पहिलोपटक पूर्णगणना हुने
गर्भवतीलाई हेलिकप्टरद्वारा उद्धार